Diintii ayaad Iibsateen!
"Ilaaha ammaantaydow, ha iska aamusin, waayo, waxay igu kala qaadeen afka kan sharka leh iyo kan khiyaanada lehba, oo waxay igula hadleen carrab been sheega. Oo weliba waxay igu harreereeyeen erayo nacayb badan, oo sabab la'aan bay iigula dirireen. Anigoo jecel bay cadow ii yihiin. Laakiinse, anigu Ilaah baan baryaa. Wanaag waxay iigaga abaalgudeen xumaan, jacaylna nacayb" (Sabuurrada nebi Daa'uud 109:1-5).
Marka laga soo tago cayda, habaarka, hanjabaadda, takoorka, iyo dhibaatooyinka kale ee badan ee naga soo gaadha Soomaalida Muslimiinta ah, waxaa kale oo jirta arrin soo noqnoqota oo Soomaali badan ka dhaadhacsan oo ay nagu eedeeyaan, taas oo ah: inay Soomaalida Masiixiyiinta ahi diinta uga baxeen lacag la siiyey darteed! Waxaa fikradaha ay Soomaalidu noo soo diraan aad ugu badan, "lacag baad qaadateen, diintii baad iibsateen, adduun baad diintii ku beddelateen... iwm."
Sida Xawliga ah ee Islaamka looga sii "Qulqulayo"
Qore: ​Bassam Michael Madany
War kuma yara adduunka Carabta haddii aad eegtid wargeysyada la daabaco iyo internet-kaba. Wararka saaka igaga soo hor baxay ilo-wareedyo kala duduwan waxaa ka mid ahaa: "Dadaalka Iraan ugu Jirto inay Saamayn Dheeraad ah ku Yeelato Ciraaq iyo Siiriya oo Kacdoon lagala Hor Yimid." "Madaafiic ay Maleeshiyada reer Gaza ku tuureen Israa'iil ayaa Israa'iil duqayn kaga jawaabtey." Iyo mowduucyo kale oo aan haba yaraatee wanaag ku sallaysnayn sida kooxo Liibiya jooga oo madaxnimada isku haysta, colaadda Siiriya iyo qolooyinka badan ee gacanta kula jira iyo wixii la mid ah.
Haddii dhinac kale laga eego, haba yaraatee warbaahinta caadiga ahi waxba kamay odhan isbeddelka ka socda bulshooyinka Carabta dhexdooda ee tusaya sida xawliga ah ay dhallinyaradu diinta Islaamka uga "sii qulqulayaan." Laga yaabee inay warbaahinta reer Galbeedku mowduucan u arkaan mid xaasaasi ah oo ay tahay in laga aamuso!